झाडीमा लुकेका बलत्कार आरोपी एसएसपी कास्की प्रहरीको नियन्त्रणमा – Sandesh Munch
झाडीमा लुकेका बलत्कार आरोपी एसएसपी कास्की प्रहरीको नियन्त्रणमा
July 16, 2020 149
काठमाडौं। बलात्कारको आरोप लागेका सशस्त्र प्रहरी बल, हुल तथा दंगा व्यवस्था तालिम शिक्षालय लामपाटन पोखरामा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी बलका बरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) राजेन्द्र अधिकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान शुरु गरेको छ। शसस्त्र प्रहरीले एसएसपी अधिकारीलाई बुधबार साँझ अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीलाई जिम्मा लगाएपछि अनुसन्धान शुरु गरेको हो।
चितवन भरतपुरकी एक २७ वर्षिया महिलाले आफूमाथि बलात्कार भएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा फोनबाटै उजुरी गरेपछि उनीमाथि अनुसन्धान शुरु भएको हो । बुधबार नियन्त्रणमा लिइएका उनीमाथि बिहीबारदेखि नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान थाल्ने बताइएको छ। शसस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी प्रविन कुमार श्रेष्ठले आरोपी एसएसपी अधिकारीको निलम्बन प्रक्रिया शुरु भएको बताएका छन्। उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पत्र पठाएपछि निलम्बन प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिए। ‘अब तत्काल उहाँको निलम्बन प्रक्रिया शुरु हुन्छ, जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट पत्र आउनासाथ यताबाट निलम्बनको प्रक्रिया थाल्छौं, हामीले पनि आफ्नै तरीकाले अनुसन्धान गरिसकेका छौं,’ डीआईजी श्रेष्ठले भने।
उनलाई चितवन भरतपुरकी एक २७ वर्षिया महिलाले बलात्कारको आरोप लगाएकी हुन् । महिलाले आफूलाई भेट्न बोलाएर लठ्याउने औषधि खुवाएर बलात्कार गरेको बताएकी छन् । पोखरास्थित मामा घरमा आएका बेला आफूलाई बोलाएकाले आफू सशस्त्र प्रहरी कार्यालय गएको त्यतिबेला आफूमाथि बलात्कार भएको भन्दै उजुरी आएको प्रहरीले जनाएको छ।
मंगलबार दिउँसो आफूलाई एसएसपी अधिकारीले बलात्कार गरेको भन्दै उनले प्रहरीमा जाहेरी दिएको बताइएको छ। तर कास्की प्रहरीले भने लिखित नभई मौखिक उजुरी परेको बताएको छ। पीडितले दिएको उजुरीका आधारमा कार्यालय भन्दा करीब ३०÷४० मिटर पर झाडीमा लुकेर बसिरहेको अवस्थामा आरोपित अधिकारीलाई पक्राउ गरिएको गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी किरण राणाले जानकारी दिइन्।
पक्राउ परेका अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिएर सामान्य सोधपुछ गरिए पनि अनुसन्धान गर्न बाँकी रहेको उनले बताइन्। कास्कीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठसहितको टोलीले घट्नास्थलको अवलोकन गरेको छ। शुरुमा डीएसपी सुवास हमालको टोली गएर पक्राउ गरेलगत्तै एसपी नेतृत्वको टोली गएर घट्नास्थलको अवलोकन गरेको हो। एसपी श्रेष्ठले आरोपित एसएसपी अधिकारीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा राखिएको बताए। बलात्कृत भनिएकी महिलालाई भने स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल पठाइएको छ।
Prevबूढानिलकण्ठ कार दुर्घटनाका चालक पाँच लाख धरौटीमा रिहा
Nextकर्मचारीलाई बिना तलब ५ वर्षको विदा दिदैँ एयर ईण्डिया
शुभ हुन्न यी राशिबीच प्रेमविवाह !
पहिरामा परेर आज एकै दिन १७ को मृत्यु, २८ बेपत्ता!
पाँचथर कोरोनामुक्तः संक्रमित निको भएर घर फर्के